राजेन्द्र महतो - धनुषा क्षेत्र नं. ३
सर्लाहीको बबरगञ्जमा जन्मिएका महतो राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य हुन् । पिता खोभारी राय महतो र आमा राजकुमारी देवी महतोको छोरा महतो ०४६ सालका राजनीतिक परिर्वतनसँगै राजनीतिमा होमिएका हुन् ।
कुनै समय एयरपोर्टमा ठेक्कापट्टाको काम गरे महतो विभेदविरुद्ध लड्न राजनीतिमा आएको मान्छन् ।
हर्कबहादुर गुरुङको आयोगले बसाइँ सराइसम्वन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदा नागरिकता नभएका कारण अधिकांश मधेसीलाई भारतीय भनेपछि कांग्रेस छाडेका गजेन्ऽनारायण सिंहले सदभावना परिषद गठन गरे, जुन ०४७ सालको परिर्वतनपछि सदभावना पार्टीमा परिणत भयो । महतो पनि त्यही सदभावना पार्टीमा आवद्ध भएका थिए । उनी पार्टीको अध्यक्ष बने, पटकपटक मन्त्री बने ।
पछिल्लो पटक मधेस केन्द्रीय ६ दल मिलेर राजपा गठन हुँदा उनी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य रहे । महतो बेलाबेला विवादमा पनि पर्छन् । मधेस आन्दोलन सुरु गर्नुअघि काठमाडौंको दानापानी बन्छ गर्छु भनेपछि उनी आलोचनामा परे ।
अहिले उनी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिसँग धनुषा ३ मा चुनाव लडेका छन् । सर्लाहीमा चुनाव लड्दै हार जित दुबै व्यहोरेका महतो पहिलोपटक जनकपुरबाट चुनाव लड्न लागेका हुन् ।
सरकारले सहमति अनुसार काम नगरेपछि समर्थन फिर्ता : राजेन्द्र महतो
राजेन्द्र महतोः अब हेर्दै जाऔं, स्टेप बाई स्टेप !
‘प्रचण्डलाई मुद्दा नलाग्ने, थारुको बच्चालाई जेल हाल्ने ?’
सरकारमा जाने सोच छैनः महतो
राजपा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक बने महतो